Omunye zikanokusho kunazo izivakashi izindawo Turkey Side. Lapha uzothola okuningi Amahhotela okunethezeka ukuze ivumelane yonke akuthandayo, kanye ezihlukahlukene zokuzijabulisa. Uma uya khona vacation wakho olandelayo oyikhethile Turkey, Vera Stone Palace 5 * (Side) kuyinto inketho kakhulu yokuhlala. Iqiniso lokuthi leli hhotela inikeza izivakashi zalo zenani, futhi lokho kwabathinta ke washiya lonke bezwe kwethu, sifunda namuhla.
Ihhotela itholakala resort emzaneni Çolaklı. Ibanga edolobheni Side ingamakhilomitha angu-nanye, futhi emadolobheni amakhulu ugu - Antalya - 65 km. Esikhumulweni sezindiza esiseduzane ingamakhilomitha angu-55 ukusuka. Ngakho ngemva egibela indiza yakho endleleni emoyeni imbobo complex hotel kuzokusa isikhathi esingaphezudlwana nje kwehora. Naphezu kweqiniso lokuthi "UVera Stone Palace" itholakala emgqeni wesibili, ihhotela unazo yayo ebhishi amahle yangasese isihlabathi lecolisakele. Hamba kuye budebuduze - amamitha 250 kuphela.
Vera Stone Palace 5 *: isithombe kanye nencazelo yehhotela
izivakashi Okokuqala ihhotela wathatha ngo-1998. Kusukela ngaleso sikhathi, lapha izikhathi ezimbalwa, ukusebenza kabusha, lokugcina owenzeka ngo-2012.
Namuhla, "UVera Stone Palace" kuyinto ukhululekile, samanje futhi zonke nengqalasizinda edingekayo of the complex hotel. Sekukonke kukhona 330 amakamelo, okuyinto zitholakala amane eziningana futhi ezinhlanu storey izakhiwo. Njengoba Vera Stone Palace - Ihhotela lezinkanyezi ezingu-5, zonke amakamelo ivulekile, elikhanyayo, ahlanzekile, ethokomele futhi zikhululekile. Lapha uzothola konke okudingayo ukuze ukuhlala kwakho. Kuyefana nasendleleni Imininingwane ingqalasizinda ehhotela. Ngakho, ihhotela inikeza uhla ezihlukahlukene amasevisi, kanye amaningi amathuba ukuzijabulisa kanye iholidi ezithakazelisayo. Le ndawo lokhu hhotela ayizinkulungwane 32 square metres. "UVera Stone Palace" uphelele yokuchitha isizungu umndeni okuphumuzayo nezingane bobudala obungefani, futhi ukuba izinkampani abasha onamileyo.
Ngokuhambisana wamukela Vera Stone Palace 5 * imithetho yangaphakathi, kukhona iwashi ngokufika izivakashi phuma. Ngakho, inani labantu abahlala abahambi eyenziwa kusukela 14:00. Nokho, lo mthetho akuyona esiqinile, kanye nokuphatha njalo uzama ukuhlangana nezivakashi. Ngakho uma ufika phambi umnqamulajuqu ke, inqobo nje uma inombolo yakho isivele ezikhishwe Izivakashi ukuhlala kuwo kukuwe, futhi kahle okulungiselelwe wasendlini ehhotela, ungafaka ngokushesha. kungenzeka okunjalo akuhlali kutholakala phakathi isiqongo samaholidi, lapho ihhotela ugcwele, njengoba besho, "kuze kube izinhlamvu zamehlo." Ngakho, uma ikamelo lakho akakabi ukulungele ukuhambisa, ungakwazi ushiye izinto kwemithwalo futhi adle endaweni yokudlela, ukubhukuda echibini, nihambahambe emhlabeni ihhotela noma iyanqo kolwandle ogwini.
Ngokuqondene Ukuhamba Vera Stone Palace 5 * ke siphume kulelo hhotela une kuze kube semini. Lapho ukulethwa okhiye futhi kudingeke ukuba ukhokhe intengo. Ungakhokha ngokheshe noma ikhadi plastic amasistimu wokukhokha ezifana "MasterCard" futhi "Visa". The kungenzeka amakhadi ezinye izinhlelo zokukhokha yokukhokha kufanele kuxoxiswane kusengaphambili ne ehhotela. Uma uthenga ohambweni lokuya "Vera Stone Palace" ngokusebenzisa inkampani yokulungisela abahambayo futhi ikhokhelwa ngokugcwele off naye kule ndawo, at the ophumayo uzobona kuphela ukukhokhela izinsiza ezengeziwe uma usebenzisa lezo.
Ngenxa aphambili ehhotela eziyinkimbinkimbi "UVera Stone Palace" is Positioning ngokwaso esikhathini esiningi libe yindawo iholidi lomkhaya, lapha yokuhlala wamukelekile zezivakashi nezingane bobudala obuhlukene. Nakuba egumbini lakho ubeka i extra ingane uhlaka isikhathi esingaba iminyaka emibili ubudala noma usebenzisa izinto zokulala ekhona - ingane kuze kube iminyaka eyishumi nambili, ngaphezu yokuyikhokhela ungenayo. Ufaka Ingane eneminyaka engaphezu kuka nambili ubudala noma umuntu omdala i Embhedeni owenezelwe kungadla in inani 70% yezindleko ophilayo ukuba umuntu oyedwa. Khumbula ukuthi egumbini ngalinye Vera Stone Palace kuyona 5 * Ihhotela eziyinkimbinkimbi zingafakwa kuphela izingane into eyodwa noma ngaphezulu, noma embhedeni omdala. Ngaphezu kwalokho, uma udinga le sevisi, kubalulekile kusengaphambili ukuba wazise ihhotela kusengaphambili futhi uthole isiqinisekiso ezivela kuye.
Izilwane ezifuywayo wamukelekile
Leli phuzu kubaluleke kakhulu kulabo abahambi abangakwazi ukucabanga uhambo iholide ngaphandle inkampani abasha yakhe (noma cha ngakho) umngane abane-ezinemilenze. Ngakho, ngokuvumelana nemithetho sangaphakathi eziyinkimbinkimbi ehhotela "UVera Stone Palace" (Side, Turkey), kubekwe ku insimu yalo izivakashi ezifuywayo zivinjelwe. Ngakho-ke, kuzodingeka ukuthi namanje ushiye isilwane sakho ekhaya eholidini noma okunye uzophelelwa ehhotela okuqondene "ezifuywayo-friendly" isigaba.
Isibalo samakamelo kanye ikamelo izinhlobo
Njengoba sekushiwo, ihhotela aphambili "UVera Stone Palace", ise-Turkish iholide esifundeni Side, ngezinye yayo kulahlwa 330 amakamelo ukhululekile, ukuvalelwa ngendlela yesimanje amahlanu anamane storey izakhiwo phezu oluhlaza futhi olunothile indawo siqu. Amagumbi kule mikhakha elandelayo: ejwayelekile, umndeni, esiphakeme futhi enzelwe abantu abakhubazekile. Sinikeza kabanzi ukuthola ukuthi yini umehluko phakathi kwalezi izinombolo.
Ngo Vera Stone Palace 5 * igumbi elijwayelekile (uhlobo nenani elinqunyiwe) ine indawo 24 square metres. I Ihhotela has 165 amakamelo yalolu hlobo. Bonke bangabangasokile ukhululekile futhi ahlotshiswe isitayela wesimanje. Lamakamelo uzokubonisa izindawo ebabazekayo kwechibi, ensimini enhle noma emgwaqweni. Ubuningi lapha angazamukela 2 (1) isivakashi.
Ikamelo lomndeni ine indawo 32 square metres futhi has amakamelo amabili okulala. I Ihhotela has 107 amakamelo naschityvaetsyasya zalolu hlobo. Kushalazela ngaphesheya kwechibi, ingadi yehhotela noma emgwaqweni. Lezi amakamelo angazamukela lungene 4 izivakashi.
Igumbi Uphakeme ine indawo 28 square metres. Amawindi ala makamelo futhi ezibheke pool, ingadi noma emgwaqweni. Ihlanganise egumbini kwalesi sigaba kungaba esiphezulu 2 (1) isivakashi.
Ngaphezu kwalokho, ihhotela has amakamelo amathathu, balungisa ahlomele kwabantu abakhubazekile.
Zonke amakamelo ngesikhathi Vera Stone Palace 5 * (Side) ukhululekile futhi ephelele ukuhlala phakathi iholidi lakho eTurkey. Ngamunye emakamelweni has a yokugezela ayimfihlo okugeza, ngigeza futhi umshini wokomisa izinwele, kuvulandi nge ukubukwa ebabazekayo, ifenisha ukhululekile, mini-bar, satellite TV (kufaka iziteshi yezokusakaza ngesiRashiya), ucingo, emaphakathi air conditioning kanye ephephile. Esitezi embhedeni amakamelo laminate. iminyango Igumbi obuseduze sivala electronic. Ukuhlanza lamakamelo senzeka nsuku zonke. Ngaphezu kwalokho, njalo ngemva kwezinsuku ezintathu, izintombi zasemizini zizoshintsha amashidi kanye amathawula. Ngaphezu kwalokho, zonke izihambeli ehhotela nethuba ngasiphi isikhathi oda ikamelo inkonzo.
E complex hotel "UVera Stone Palace"
Uhlelo ugesi e Vera Stone Palace kuyona 5 * ihlelwe on ethandwa kakhulu namuhla, "zonke okufakayo" ( "Ol okufakayo") uhlelo. Yokudlela eyinhloko ihhotela ngaphansi kwegama "Stone" kusukela ekuseni kwaze kuhwalele wakhonza lezitsha style. Lapho labapheki abanolwazi ngeke ukukunikeza ezihlukahlukene okumnandi izitsha njengoba kazwelonke cuisine Turkish ngamazwe. Ngaphezu kwalokho, kukhona imenyu wokwehlisa umzimba. Ngaphezu nengaphakathi ehhotela bese usebenza zokudlela ezimbili "a la Carte": kwasolwandle futhi Italian. Kuzo ungakwazi adle à la Carte. Uma ufuna ukuya yokudlela "a la Carte", kufanele eceleni itafula kusengaphambili.
Ehhotela Vera Stone Palace 5 *, ngaphezu zokudlela (kokubili lezitsha futhi abasebenza "a la Carte"), eziqhutshwa nemigoqo eziningana. Ngakho, lapha kukhona ibha yokwamukela izivakashi (nge Ukukhetha eziningi iziphuzo kusukela 10 am kuya phakathi kwamabili), ibha ZOKUBHUKUDA (ezihlukahlukene iziphuzo kanye umculo bukhoma), ibha umthamo (lapho awukwazi kuphela ukuphuza isiphuzo, kodwa futhi isidlo) ibha yemidlalo wazihlephula ibha (egijima kusukela phakathi kwamabili kuya ngehora lesithathu ekuseni).
Njengoba ngishilo ngenhla, naphezu kweqiniso lokuthi ihhotela aphambili "UVera Stone Palace" (Side, Turkey) ivuliwe umusho wesibili kulahlwa yayo sandy beach kwayo. Ibanga kuba amamitha 250 kuphela. Ngesikhathi sebehlezi ogwini anawo izivakashi eyinkimbinkimbi ehhotela inikeza ukhululekile emphemeni izihlalo kanye awnings. Kukhona ibha nge iziphuzo kanye Ungadla futhi yokudlela lapho ungakwazi adle ngaphandle kokubuya ehhotela. Ngaphezu kwalokho, ogwini kukhona inala amathuba nokungcebeleka esebenzayo.
Vera Stone Palace Ihhotela 5 * selikhanyise okubhukuda ezinhlanu. Bahlanganisa enkulu ongaphandle indawo yokubhukuda, ichibi nge-slide, pool zezingane, futhi ichibi zasendlini. Izici ehhotela kanye ilanga ithala enkulu, lapho ungathola ekhululekile loungers ukhululekile. Ngaphezu kwalokho, kukhona ibha ZOKUBHUKUDA nge Ukukhetha eziningi kokubili iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza esithambile.
Ngaphandle ebhukuda pool, ulwandle nakho esiziphumulele ilanga ithala kanye ebhishi, ihhotela unethuba uvakashele spa nokuphila kahle isikhungo. Lapha ungakwazi ukuya sauna, Hammam (okugeza Turkish), massage nobuhle ukwelashwa ukwenza. Ngaphezu kwalokho, ehhotela eziqhutshwa salon ubuhle kanye wezinwele, lapho ungathola manicure, pedicure futhi ngesitayela esisha sezinwele.
Ngo Vera Stone Palace 5 * usuku lonke futhi sebusuku Animators ukusebenza, ngenze yonke imizamo yokuba wenze isikhathi sakho sokungcebeleka ezithakazelisayo. Kusihlwa yemidlalo umbukiso kukhona abaculi abamenyiwe futhi agcinwe kumnandi imincintiswano.
izivakashi Active ungadlala-volleyball yasolwandle, ithenisi noma ping-pong, amabhiliyade, imicibisholo, ihhashi ogibele, vakashela amakilasi aerobics kanye ejimini. Ngesikhathi sebehlezi ogwini has konke okudingayo ukuze amanzi ezemidlalo.
Vera Stone Palace 5 *: Izibuyekezo
Njengoba abavakashi abaningi lapho ekhetha indawo ukuphumula uholwe kuhlanganise lokubuka lokhu noma ukuthi abantu ehhotela Usuvakashele ke, ukukunikeza isifinyezo sezinto Izibuyekezo "UVera Stone Palace" (Side, Turkey).
Ngokuvamile, kufanele kuphawulwe ukuthi lokhu impahla ikakhulukazi wakufeza lokho okwakulindelwe ezakhamizi zethu nabo. Mhlawumbe ethile kuphela zezivakashi zakhe ukubiza indawo emgqeni wesibili. Nokho, abahambi abaningi bathi kwamaminithi ambalwa ukuhamba kuze kufike elwandle ijubane unhurried akunzima, kodwa kunalokho, ngisho emnandi. ebhishi uqobo kwaba lihlanzekile kakhulu, ezinkulu, ne ukhululekile ilanga loungers kanye baphathe nezambulela kanye ibha kanye yokudlela. Nokho, abanye amaholide, zaba kancane bedidwe iqiniso lokuthi amathawula lolwandle ungayithola enye, nakuba nethokheni ($ 1), kodwa kwendibilishi.
Kepha Vera Stone Palace amakamelo (Colakli) 5 *, iningi baseRussia sebanelisekile ngempela. Ngakho, yokuhlanza Kwenziwa njalo, futhi amashidi kanye amathawula baguqulelwa ngesikhathi. Ikakhulukazi, izintombi zasemizini wazama uma beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni ushiye ithiphu.
Mayelana ukudla njengoba kwakungekho nokuningi ukungavumelani. Ngakho, abaningi abantu bakithi bathole ukudla lapha ezihlukahlukene kakhulu futhi esihlwabusayo. Ungase njalo ukuthola dish ukunambitheka yakho. Ngakho musa alambe, futhi abadala noma izingane. Futhi uyajabula ngethuba nokudlela e ilungelo yokudlela ogwini emuva ehhotela ngaphandle kokuthi.
Abantu abaningi imibono emihle mayelana ehhotela "UVera Stone Palace" libhekisela ukusebenza kulo iqembu Animators. Ngakho, abantu bethu yathola nabameleli bayo ochwepheshe kweqiniso abathandana ngempela futhi wazi kanjani ukubungaza izivakashi. Ngakho, izivakashi eziningi zithi alolu izithombe ayitholakali kweminye aphambili e-Turkey. Futhi uhlelo ukuzijabulisa lapha lihlanganisa zonke kungakhathaliseki ubudala ubuzwe. Ngakho-ke, izingane nsuku zonke kuyinto mini-club kanye ema-disco in the kusihlwa. Ukuze ongaphandle abathanda aerobics amakilasi, yoga nezinye imicimbi yezemidlalo. Futhi labo uncamela uphumule ngasechibini, alindele inala kumnandi imincintiswano nezinye izenzakalo ukuzijabulisa. Futhi-ke, kusihlwa yemidlalo yehhotela labetibambile show egqamile futhi somlilo.
Kufinyeta, singasho ngokuqiniseka ukuthi iningi izivakashi Russian babe iholide ngempela happy inkanyezi hotel amahlanu "UVera Stone Palace" (Side, Turkey). Abanaso siqambe kungenzeka eza lapha futhi bayokujabulela ancoma leli hhotela kubangani nomndeni.
Labada Beach Ihhotela 5 * (Kemer / Turkey): incazelo ehhotela, kanye nokubuyekeza
Kibby kuDavide: indlela ukudala besitayela sakhe? ISEBENZA KANJANI LENDLELA typecasting uDavide Kibbee
Ngubani insizwa eyi-Rasta, futhi yini ibadla?